Hordhac: Manchester Utd v Tottenham – Red Devils Oo Raadineysa Guushii Ugu Horeysay Ee Old Trafford Tan Iyo September | CeelSheekh News
Hordhac: Manchester Utd v Tottenham – Red Devils Oo Raadineysa Guushii Ugu Horeysay Ee Old Trafford Tan Iyo September
December 11, 2016 - Written by Abdi
Luke Shaw iyo Cris Smalling aya wali ka maqan Manchester United iyadoo Red Devils ay gurigeeda kusoo dhaweyneyso Tottenham Hotspur.
Jose Mourinho wiilashiisa ayaa raadinaya guushii ugu horeysay ee Old Trafford kulamada horyaalka tan iyo September madama ay afar kulan oo xiriir ah barbaro galeen.
Tottenham ayaa guul gaartay labadii kulan ee ugu dambeysay waxaana usii muuqda wali xasuuqii ay u geysatay Swansea City markaas oo ay ku dileen 5-0. sidoo kalana CSKA Moscow ayey 3-1 ku qaarijiyeen kulan ka tirsan Champions League.
Kulanka: Manchester United vs Tottenham Hotspur
Garsore: Robert Madley (England)
Toby Alderweireld aya muddo kadib dib ugu soo laaban kara Spurs si uu u wajaho Manchester United, daafaca reer Belgium ayaana muddo sideed isbuuc ah garoomada ka maqnaa balse kulankii CSKA Moscow ayuu kursiga keydka soo fariistay.
Erik Lamela ayan wali diyaar u aheyn inuu ciyaaro madama uu wali ku maqan yahay Argentina halkaas oo uu kula jiro isbitaal walaalkiis. Vincent Janssen ayaa isna ka maqan kooxda kaas canqawga dhibaato ka qaba.
Dhanka kale Michael Carrick, Antonio Valencia iyo Matteo Darmian ayaa u muuqda kuwa kusoo laaban kara shaxda Mourinho madama ay seegeen ciyaartoo Zorya.
Manchester United ayaa badisay kaliya laba jeer sideedii kulan ee ugu dambeysay oo ay kulamada Premier League-ga wajahday Spurs, 3-barbaro iyo 3-guul ayaa u raaca.
Spurs ayaa 3-0 ku dubatay United bishii April ee sanadkaan ciyaar ka dhacday White Hart Lane, waxeyna aheyd guushii ugu weyneyd oo ay Spurs ka gaarto Red Devils tan iyo January 1996 markaas oo 4-1 ku xaaqday.
Si kastaba, Spurs ayaa lumisay 19-jeer oo ay booqatay Old Trafford kulamada EPL-ka, kaliya 2-guul iyo 3-barbaro ayey ka heysataa, waana garoonka ugu xun ee ay booqato. Spurs waa mid ka mid ah 7-kooxood oo uu Wayne Rooney ka dhaliyay in ka badan 10-gool kulamada horyaalka Ingiriiska waxaa ku wehliya Arsenal iyo Newcastle United. Kooxda martida ah ayaa mar walba ku fashilmeysay iney gool dhaliso afartii kulan ee kulamada EPL-ka ee ay yeeshaan United iyo Spurs.